Nin diiday inuu gacan qaado haweeney dooneysay in ay siiso shahaadada dhalashada ayaa loo diiday… – Hagaag.com
Posted on 19 Oktoobar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maxkamad ku taal Jarmalka ayaa go’aamisay in aan la siin dhalashada dalkaasi dhakhtar Muslim ah oo diiday inuu gacan qaado haweeney dooneysay inay siiso shahaadada dhalashada, sida uu qoray wargeyska Ingriiska ee The Telegraph.
Wargeysku wuxuu sheegay in maxkamadda maamulka ee gobolka (Baden-Württemberg) ee ku taal koonfur-galbeed Jarmalka ay ninkan – oo asal ahaan ka soo jeeda Lubnaan ka xayuubisay xuquuqdiisa uu ku noqon lahaa Jarmalka ka dib markii uu diiday inuu gacan qaado haweeney, maxaa yeelay tan waxaa loo arkaa inay tahay caddeyn inuu u arkay inay tahay “hanjabaad xagga galmada ah,” sida ay sheegtay maxkamadda.
Garsoorayaashu waxay sharaxeen in helitaanka dhalashada Jarmalka ay ku xiran tahay awooda codsadaha si uu u cadeeyo inuu ku noolyahay qiyamka ku xusan dastuurka Jarmalka, kaas oo ka hadlaya sinaanta jinsiga.
Xukunka ayaa lagu sheegay in isgacan qaadka uu yahay “dhaqan soo jireen ah oo salaanta ama macsalaameyn ah, iyadoo aan loo eegin xaaladda bulshada ama jinsiga (lab iyo dhedig). In kasta oo ay jiraan salaamo kale oo la aqoonsan yahay oo ka jira Jarmalka, sida dhunkashada ama isku dhega, isgacan qaadashadu waa mid muhiimad gaar ah u leh isticmaalka rasmiga ah ee ay u leedahay dhameystirka macaamillada ganacsiga.” sababta oo ah waxay caddeyn u tahay heshiiska maxkamadaha qaarkood. “
Dhacdadu waxay aheyd sanadkii 2015 intii lagu guda jiray xaflad lagu noqdo muwaadinnimada oo ahayd hanaan caadi ah oo rasmi ah oo loogu wareejinayey shahaadada dhalashada ninkan Muslimka ah, gaar ahaan ka dib markii uu helay dhibcaha ugu sareeya ee suurtogalka ah ee imtixaanka muwaadinimada, wuxuu yahay imtixaan lagu baarayo baaxadda fahamka muhaajiriinta ee taariikhda Jarmalka iyo qiyamkeeda dimoqraadiyadda.
Laakiin markii ay haweeneyda ku soo dhawaatay ninka inay gacan qaado, wuu diiday, marka iyaduna, wey diiday inay u dhiibto shahaadada dhalashada.
Wargeyska ayaa xaqiijinaya in ninka 40-jirka ah ee reer Lubnaan uu heysto rikoor aad u wanaagsan oo ku saabsan is dhexgalka bulshada.Wuxuu u dhaqaaqay Jarmalka isagoo baranaya luuqada sanadkii 2002 ka hor inta uusan ka qalin jabin dhakhtarnimada ka dibna u dhaqaaqin sidii uu u tagi lahaa booska dhakhtar lataliye ee isbitaal ku yaal koonfurta wadanka.
Si uu uga helo taageero mowqifkiisa maxkamadda, ninku wuxuu sheegay inuu xaaskiisa u ballan qaaday in gacantiisa aysan taaban doonin naag kale, laakiin garsoorayaasha ayaan ka soo debcin mowqifkooda, iyagoo ku sifeynaya diidmada ninka inuu gacan qaado ay tahay “tallaabo adag” oo ka tarjumeysa “aragtida Salafiyada” ee adduunka.
Waxay sidoo kale ka caroodeen hadal uu yiri oo ahaa inuusan gacan qaadi doonin qofna mustaqbalka, ha noqoto haween ama nin, iyagoo u tixgelinaya in tanaasulkaas isgacan qaadistu ay tahay oo kaliya “talaabo xeeladeysan”.
Waxaa xusid mudan in ninku hadda haysto fursad uu xukunka kaga hor imaado oo u gudbo heer federaal, taasoo ah fursadiisii ​​ugu dambeysa ee go’aanka. Dhacdadan ayaa timid ka dib markii iskuul ku yaal Berlin ay ahayd inuu raaligelin bixiyo markii mid ka mid ah barayaasheeda ay ku tilmaantay Imaam inuu yahay “misogynist” nin necban haweenka ka dib markii uu diiday inuu gacan qaado 2016.